Jabra Bluetooth Boost (Gold) ~ ICT.com.mm
HomeJabra Bluetooth Boost (Gold)
Jabra Bluetooth Boost (Gold)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ သေးငယ်ကျစ်လျစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည့် Jabra အမှတ်တံဆိပ် Bluetooth Headset (ရွှေရောင်) ဖြစ်သည်။ ဘတ္ထရီသက်တမ်းကြာမြင့်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကြာမြင့်ချိန် (၉)နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Power Nap feature ကိုအသုံးပြု၍ Stand by အနေအထားဖြင့် တစ်နှစ်တိတိထားရှိနိုင်သည်။ On/Off ခလုတ်နှင့်အတူ အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များပါဝင်သဖြင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့် Headset အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Jabra Boost, Siri... [Learn more]
သေးငယ်ကျစ်လျစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည့် Jabra အမှတ်တံဆိပ် Bluetooth Headset (ရွှေရောင်) ဖြစ်သည်။ ဘတ္ထရီသက်တမ်းကြာမြင့်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကြာမြင့်ချိန် (၉)နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Power Nap feature ကိုအသုံးပြု၍ Stand by အနေအထားဖြင့် တစ်နှစ်တိတိထားရှိနိုင်သည်။ On/Off ခလုတ်နှင့်အတူ အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များပါဝင်သဖြင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့် Headset အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Jabra Boost, Siri နှင့် Google Now တို့ကဲ့သို့ virtual assistant များကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အသုံးပြုရာတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိရန် ဦးစားပေး၍ Design ထုတ်လုပ်ပေးထား ပါသည်။
Brand: Jabra, Colour: Gold, Warranty: 1 Year
The Jabra Boost comes with extra value added. The dual USB car charger saves you time by allowing you to charge two devices at the same time in the car. Don’t worry, you can power up even when you are on-the-go